Navadik’i Stella Nyanzi ho fitaovam-piadiana ve ny fivaviana? Notsaraina amin’ny resaka fahalalaham-pitenenana ny vehivavy feminista Ogandey · Global Voices teny Malagasy
"Ny filazany ny zavatra hitan'ny olon-drehetra no hany fahadisoany."
Voadika ny 14 Mey 2019 4:51 GMT
Dr. Stella Nyanzi. Sary avy amin'ny Flickr / Toko Faha Efatra Oganda / Human Rights Convention, 2018 (CC BY-NC-ND 2.0)
Niverina tany amin'ny fitsarana ny Profesora Stella Nyanzi tamin'ny 9 Mey noho ny raharaha iray nahitana ny filazàn'ny governemanta Ogandey fa mamoafady sy manohintohina ny teny hoe fivaviana.
Tsy hohadinoina izany! Herisetra nataon'ny fanjakana tamin'i Stella!
Nosamborina tamin'ny volana Novambra 2018 i Nyanzi, 43 taona, taorian'ny nanoratany ny tononkalo nitsikera ny filoha Ogandey Yoweri Museveni sy namoaka izany tao amin'ny pejiny Facebook. Manamafy ilay tononkalo fa mety ho tsara kokoa i Ogandà raha maty tany am-piterahana i Museveni ary nampiditra famaritana marobe mivantambantana momba ny fivaviana sy ny kitson'ny renin'i Museveni izay efa maty izy tao anatin'izany. Manana mpanjohy miisa 207.895 ankehitriny ny pejin'i Nyanzi Facebook.
Nilaza ny fanjakana fa ninia nanohintohina sy nanala baraka ny filoha i Nyanzi tamin'ny tononkalony ary niampanga azy ho nanitsakitsaka ny Lalàna momba ny Fanararaotana ny Fampiasana ny Solosaina mifandraika amin'ny fanorisorenana an-tserasera sy ny famokarana votoaty “mamoafady ,vetaveta, maharikoriko, tsy mendrika.” Na dia tsy milaza ireo andininy manokana amin'ny tsikera ny filoha aza ny lalàna Ogandey, dia manolo-kevitra amin'ny fanamafisana ny fiarovana ny fitsikerana ny manampahefanam-panjakana ny foto-kevitra iraisampirenena momba ny fanehoan-kevitra malalaka .
Nijanona tao amin'ny fonjan'i Luzira tao Kampala, renivohitra, nandritra ny 180 andro mahery i Nyanzi. Na dia nomena fahafahana vonjimaika rehefa nandoa onitra aza izy dia nolaviny izany, ary nilaza izy fa hevi-dravina fotsiny ihany ny fanafahana azy raha mbola eo am-piandrasana ny fitsarana ny raharahany izy. Miatrika sazy an-tranomaizina herintaona izy raha voaheloka.
Nilona nandritra ny volana maromaro ity “raharahan'ny fivaviana” ity satria nahemotry ny fitsarana imbetsaka ny fitsarana ny raharaha. Nahitana ny fifanatrehana niaraka tamin'ny Lehiben'ny Polisy Lefitra Bill Ndyamuhaki, vavolombelon'ny raharaha, izay nijoro vavolombelona tamin'ny fitsarana ny 20 Martsa 2019 ihany koa ny fitsarana tamin'ny 9 Mey:
Nilaza Atoa Ndyamuhaki fa nahita ny andalana novakiany tamin'ny endrika manohintohina sy vetaveta izy. Nanontany ny antony izy. Nilaza izy fa hitany manafintohina ilay votoaty satria vetaveta izany. Nilaza izy fa vetaveta izany satria miresaka momba ny faritra ara-pananahana izay manohintohina ho an'ny maro ao amin'ny fiarahamonina.
Tao amin'ny efitrano fitsarana feno olona, nanolotra seza ho an'i Nyanzi ny mpitsara, saingy nanapa-kevitra ny “hijoro ho an'ireo vehivavy” izy araka ny voalazan'ity sioka ity rehefa nolazaina fa tsy mety ho azy amin'ny maha-vehivavy azy ny mijoro:
Nanolotra seza ho an'i Stella ny mpitsara Kamasanyu, ary nilaza ity farany fa mety ho vizana izy raha mijoro amin'ny maha vehivavy azy. Raha handeha hipetraka iny i Stella dia nandà izany indray rehefa nandre ilay fanehoan-kevitra fa satria vehivavy izy. Nanambara izy fa hijoro ho an'ireo vehivavy.
Nalefa teo amin'ny efijery lehibe tao amin'ny fitsarana ny fitantarana iray manontolo momba ny fitondrantenan'i Nyanzi an-tserasera mba hiresahana momba ny lahatsoratra tsirairay voatanisa, anisan'izany ny tononkalon'ny “fivaviana”. Nisioka ny vaovao farany momba ity raharaha ity i Bwesigye bwa Mwesigire, mpanoratra sady mpisolovava:
Nalefa teo amin'ny efijery goavana ny fitantarana ny fizotry ny raharahan'i Stella Nyanzi, mba hahafahan'ny Lehiben'ny Polisy Lefitra Bill Dickson Ndyamuhaki mamaritra ireo lahatsoratra izay nanaovany fanadihadiana ary mba hanamarinana fa nataon'ilay voafonja tokoa izany.
Kanefa tsy mbola nifarana ny raharaha ary mbola nahemotra ho amin'ny 13 Mey indray.
Namarana ny anjarany tamin'ny fijoroana vavolombelona i Derrick Bazekuketta. Nahemotra ho amin'ny 13 May 2019 ny raharaha raha hanatontosa ny fijoroana vavolombelona voalohany i Isaac Ssemakadde : Bill Dickson Ndyamuhaki, Lehiben'ny Polisy Lefitra.
Niasa ho mpampianatra momba ny anthropolojia ara-pahasalamana tao amin'ny Invontoerana Makerere ho an'ny Fikarohana Ara-tsosialy izay mifantoka amin'ny miralenta sy ny fananahana i Stella Nyanzi. Mampiasa sarinteny sy fiteny matanjaka izy ao anatin'ny hafatra nentiny momba ny zon'olombelona, ​​ny fahalalaham-pitenenana ary ny pelaka feminisma amin'ny maha-poety mpiaro ny pelaka sy amin'ny feminista queer azy.
Fantatra noho izy ” vantambantam-piteny” sy ny fahasahiany manohitra ny fitondrana amin'ny alàlan'ny fanivaivana, nosamborina tamin'ny raharaha hafa i Nyanzi, noho ny faniratsirana ny filoha ihany koa. Nitranga taorian'ny tantara lava momba ny fikatrohana ara-tsosialy tany Ogandà tamin'ny taompolo 1940 teo ambany fanjanahantany Britanika ireo paikady ireo. Ninia nitsikera ny baiko tamin'ny fanjanahan-tany ireo mpikatroka Ogandey tamin'ny alàlan'ny fanivaivana niniana natao, manakorontana, manorisory, ho fomba iray hanafihana sy hanakorontanana ny fenitra ara-tsosialy Britanika.
Tamin'ny taona 2017, niatrika fiampangana mitovy tamin'izany i Nyanzi , fantatra amin'ilay hoe ” raharahan'ny fitombenana roa“, raha nantsoiny ny filoha ho amin'izany anarana izany izy ary nikendry ny vadiny ho “tsy ampy saina” izy.
Izany no ataon'ny fitombenana. Mihovotrovotra, mihozongozona, mangery, ary mangetotra . Fitombenana roa fotsiny i Museveni … Tokony ho tezitra ny Ogandey raha avelantsika hanohy hitondra ny firenentsika ireo fitombenana ireo.
Tsy nahavita nanatanteraka ny fampanantenany tamin'ny fampielezan-kevitra tamin'ny fanomezana salaka ara-pahasalamana ho an'ny mpianatra tovovavy rehetra talohan'ny fifidianana tamin'ny taona 2016 i Museveni, izay nitondra an'i Ouganda nanomboka hatramin'ny taona 1986. Nanakiana izany sy ny tsy fahombiazana tamin'ny fampandrosoana hafa teo ambany fitondran'i Museveni i Nyanzi tamin'ny alàlan'ny fomba fiteniny niparitaka be tao amin'ny tambajotra sosialy.
Vakio bebe kokoa: Voampanga noho ny fampiasana amin'ny tsy tokony ho izy ny solosaina ilay akademika Ogandey sady mpitarika ny fanentanana sy fanabeazana ho an'ny fampiasana salaka
Tsy ela dia nosamborina i Nyanzi noho ny fanehoan-keviny momba ny “fitombenana roa” ary nigadra tany am-ponja nandritra ny iray volana izy ka nahatonga ny tenirohy #AfahoStellaNyanzi, izay mbola miely ao amin'ny Twitter, miaraka amin'ny #ArovyStellaNyanzi. Nahemotra tamin'ny 24 aprily 2019 ny raharaha, teo am-piandrasana ny fanadihadiana araka ny lalàm-panorenana.
Araka ny The Guardian:
Mamaritra ny tenany ho “mpamorona tononkira, poety, mpanoratra tia famoronana ary mpandalina” amin'ny fikatsahana ny governemanta tsara tantana i Nyanzi . Hentitra izy amin'ny tsikera ataony amin'ny governemanta ary tsy matahotra ny hiady hevitra momba ny fady manodidina ny fananahana sy ny miralenta ary mijoro ho an'ny zon'ny LGBT.
Maha-velom-panantenana an'i Nyanzi, mampiaka-peo azy, ary mahatonga azy ho hentitra amin'ny fanapahan-kevitra ny tenirohy tahaka ny #famadihanahofitaovampiadiananyfivaviana sy ny fanohanana goavana avy amin'ny mpiaro ny zon'olombelona ary ireo mpikatroka mafàna fo miaro ny fahalalaham-pitenenana saingy niha-ratsy ny fahasalamany ary very asa izy tao amin'ny oniversiten'i Makerere vokatry ny fikatrohany. Mety ho vidiana lafo ny fitenitenenam-poana mivantambatana na dia amin'n'ny fikatrohana mahery vaika amin'ny ady amin'ny fahantrana sy ny famoretana aza.
Araka ny tenin'ireo mpisera anaty aterineto Ogandey:
Tsy nanao fahadisoana i Stella Nyanzi, ny filazany ny zavatra hitan'ny olon-drehetra no hany fahadisoany. Ankehitriny, nampiasaina hampijaly azy ny fitsarana. Tsy mahatsiaro saina intsony ireo mpitsara .